Man Down System site na Mmeputa (A10005) | Ngwọta OMG
Onye na-arụ ọrụ naanị ya bụ onye na-arụ ọrụ naanị ya na-enweghị nlekọta na nso nso ọ bụla. Yabụ, na enweghị enyemaka ọ bụla nke ọtụtụ oge ha na-eche mmerụ ahụ ọ bụla nke nwere ike ịnwụ onye ọrụ naanị ma ọ bụrụ na enyeghị enyemaka ozugbo. Nchekwa nke ndị ọrụ naanị ụlọ ọrụ dị oke mkpa na ngalaba dịka Ọrụ Ugbo, Ngwuputa, Nrụpụta, Nmepụta, Eletriki, mmanụ na gas, Ọrụ Sanitary, Ego na Inshọransị, na Ọrụ Estlọ. Ndi otua nwere nsogbu nke ya na ndi oru owu. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịghọta ihe dị iche iche metụtara na mpaghara ọ bụla na kedu ihe ga - agbanwe agbanwe mpaghara ọ bụla na - eji anagide nsogbu ndị a.
Industrylọ ọrụ ọ bụla nwere ọrụ dịịrị n'okpuru iwu iji nye nchekwa na nchekwa maka ndị ọrụ naanị ya. N'ebe a, n'isiokwu a, anyị ga-ekwu maka ihe egwu kachasị na ndị ọrụ ụlọ ọrụ a na-echekarị na ihe nchịkwa nwere ike ime iji belata ihe egwu ndị a.
Ọ bụrụ n’anyị n’ọrụ ugbo, e nwere nnukwu ugbo na ọtụtụ ndị ọrụ, otu ọ dị, oge ndi mmadu na-arụ ọrụ naanị n’ebe ndị dịpụrụ adịpụ. N'ihi itinye aka na igwe dị oke egwu, nnukwu anụmanụ na iji aka rụọ ọrụ na-abawanye ohere nke mmerụ ahụ. Na UK mmerụ ahụ na - egbu egbu ji okpukpu 18 dị elu karịa ndị ọzọ. Yabụ, ọ na --emepụta ọnọdụ dị egwu na mpaghara ọrụ ugbo n'ụwa niile ịme ihe nke ga - enyere aka belata ihe ọghọm ndị metụtara ndị ọrụ naanị ọrụ ugbo.
Nlekọta nwere ike belata ihe egwu site na ị na-azụ ọzụzụ mgbe niile nke ha nwere ike ịgwa ha otu esi eji igwe dị egwu, Jiri aka ụmụ anụmanụ buru ibu ma jiri aka na-arụ ọrụ. N'otu aka ahụ, maka nyocha ihe egwu, ha nwere ike iji nyocha PET nke gụnyere ihe bụ ihe jikọtara ya na ndị mmadụ, gburugburu, yana ọrụ site na nke a ha ga-enyocha isi ihe egwu ọ bụla nke onye ọrụ owu na-eme. Ewezuga nke ahụ na usoro teknụzụ a nwere ike iwebata ụgbọ ala na akụrụngwa ọhụrụ nke nwere ike belata ihe egwu nwere ike itinye ya na ụzọ na ngwa ọdịnala. N'ikpeazụ, njikwa nwere ike ịkọwapụta ịnya ụgbọ ala dị mma site n'aka ndị ọrụ naanị ya bụ nke nwere ike inyere ha aka n'ime ime obodo.
Industrylọ ọrụ na-egwupụta akụ na ụba bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị n'ihe ize ndụ n'ụwa. Ebe ọnụọgụ ọnwụ nke ndị ọrụ na ndị ọrụ dị elu. Ọnụ ọgụgụ gọọmentị China na-egosi na ndị China na-egwu ala 5000 na-anwụ n'ihe ọghọm kwa afọ. Ihe ọghọm na-aga n'ihu n'ụwa niile, gụnyere ihe ọghọm ndị kpatara ọtụtụ ndị nwụrụ n'otu oge dịka ihe mberede ogbunigwe Ulyanovsk na 2007 na Russia. Ndekọ ọnụ ọgụgụ dị nkenke dị n’elu na-egosi na nchekwa adịla ogologo oge na-emetụta ụlọ ọrụ na-egwupụta akụ. Onye ahụ na-ata ahụhụ dị ukwuu na ala dị n'okpuru ala (igwu ala n'okpuru ala) karịa igwu ala. ọrụ dị iche iche na-eche ọtụtụ ihe ihu mgbe ọ na-arụ ọrụ dịka ikuku ikuku inhalation nke na-eme ka ha nwee ihe isi ike mgbe ha na-eku ume ume, ọrịa ngụgụ, ụkwara akwara, nke nwere ike ibute nsogbu iku ume. ma na-ebute ọtụtụ nsogbu ahụike, ihe egwu ndị ọzọ ha na-eche ihu dị ka mkpọtụ igwe, ihe ngosi nke na-emetụta ike ịnụ ntị ha, oke mkpọtụ na-eme oke mkpọtụ nwere ike ibute tinnitus (itinye ntị na ntị), nsogbu ihi ụra, nsogbu ịta ahụhụ ọbụlagodi oge ụfọdụ ịnụ ntị na-adịgide adịgide na kemịkalụ. gas, okpukpo ala, mmiri ikuku oxygen na-amachaghị. Nsogbu ọzọ dị na ya bụ ikwanye aru (wbv) bụ nwayọ na - akpata ọghọm nke na - abụkarị ndị ọrụ nsị na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ. Ọ dị oke mkpa ịnwe oke nke ịla n’iyi n’ọkụ anwụ dị mkpa. posurekari oke n’arụ UV nwere ike ibute ọrịa kansa akpụkpọ.
Nchịkwa ahụ kwesịrị iwebata atụmatụ nchịkwa nke uzuzu na onye nlekọta, ma ọ bụ njikwa elu kwesịrị ijide n'aka na usoro nchịkwa ájá na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ na ọ naghị. Anyị kwesịrị ịzụ ha ka ha ga-esi jikọọ oke ikuku. Kedu ihe akpachara anya mere n'oge ịreụbiga uzuzu uzuzu. Ekwesịrị iji nchedo nchekwa ahụ mgbe etinyere, na-edozi ma ọ bụ rụkwaa nchebe nke uzuzu. Inyocha ụlọ ọgwụ na ikenyocha dịkwa mkpa. Iji kpuchido ndị ọrụ ha megide mkpọtụ, njikwa usoro ahụ ga-ebu ụzọ mee nke ahụ na ha tụlere ọnọdụ mkpọtụ ọnọdụ ọrụ site na nyocha ihe egwu. Ha nwere ike iji ndị na-eme mkpọtụ na ogwe ihe na-anabata ihe iji wee nwee ike ijikwa vibration na-arụ ọrụ na gburugburu ebe ọrụ. Ijikwa ya na nlele oge niile na igwe ndị dị arọ dịkwa mkpa iji belata ihe oke mkpọtụ. Ndị ọrụ kwesịrị iji ngwaọrụ nchebe mkpọtụ na-enyere ha aka belata ihe ndị na-eme mkpọtụ. Maka njikwa ihe egwu na-emetụta oke ọrụ kwesịrị ibelata oge ọrụ ndị ọrụ, njikwa kwesịrị ịhazi nhazi oge ọrụ maka ndị ọrụ, ezigbo ọzụzụ na ọzụzụ dị oke mkpa maka ọrụ a, nyocha ahụike mgbe niile na nyochaa nsochi azụ nwere ike belata ihe egwu a dị egwu.
Nchịkwa kwesịrị ịme nyocha nke ihe egwu dị na nhazi oge ọpụpụ iji nyere aka n'ịzụlite usoro nchebe anwụ kwesịrị ekwesị.
Thezọ kachasị dị irè iji belata mkpịsị UV bụ iji usoro nchebe kpuchie, anyị enweghị ike ịdabere na usoro dị mfe, anyị kwesịrị iji usoro nchebe dị ka gụnyere ịhazigharị ọrụ iji zere ọnụ ọgụgụ kacha elu nke UV ụbọchị, nye anyị. ndò ma ọ bụ nke wuru awade-na-enye uwe nchebe kwesịrị ekwesị, yana itinye sunscreen.
Akụkụ ndị na-emepụta ihe na-etinye aka na mgbanwe nke akụrụngwa na ngwongwo. Akụkụ ndị na-emepụta ihe gụnyere ọgwụ, nri, ụgbọ ala, akwa, yana azụmaahịa ndị ọzọ metụtara ya. Dịka ngalaba ndị ọzọ ebe a na mpaghara nrụpụta, enwere ọtụtụ ebe ha chọrọ ndị ọrụ na-anọ nanị ha dịka ndozi na ndozi. Ọ bụrụ na onye ọrụ elepụghị anya, ihe ize ndụ ya na ndị ọrụ owu na-abawanye. Igwe dị egwu bụ isi ihe kpatara mmerụ ahụ na mpaghara n'ichepụta, n'aka nke ọzọ, ndị ọrụ owu anaghị enwe ike ịkparịta ụka iji nweta enyemaka n'ọnọdụ dị ize ndụ.
Njikwa nwere ike ịchọpụta ndị ọrụ niile na-arụ ọrụ na mpaghara n'ichepụta wee mezie nyocha ihe egwu metụtara ọrụ onye ọ bụla na-arụ ọrụ. Mgbe ha nyochachara ihe ize ndụ ha nwere ike imepụta amụma gbasara nchekwa nke ndị ọrụ naanị ya. Ewezuga ndị ọrụ ahụ nwere ike iburu mkpu mgbe ha na-aga maka ọrụ dị n'ime ime obodo. N'otu aka ahụ, ha nwere ike ịkpachara anya mgbe ha na-eji akụrụngwa. Ndi otu nwere ike inye ha ihe nchedo Onwe ha nke ga-ebelata ihe ojoo o na ndi oru aka.
Industrylọ ọrụ mmanụ na gas
Ọ bụrụ na anyị hụrụ ọnụahịa mmanụ na gas dị ala karịa ka ọ dịburu, yabụ na njikwa ego ole na ole, agbanyeghị, anyị agaghị ekwenye na nchekwa nke ndị ọrụ naanị. Ebe mmanụ na gas dị ukwuu dị na mpaghara dịpụrụ adịpụ ebe enwere ike idobe njikọ ya na ndị ọrụ naanị ya. Ọ nwere nsogbu na-enweghị nsogbu na mpaghara mmanụ na gas nke na-amụ ọtụtụ ihe egwu. Ihe ọghọm kachasị ejikọtara na ndị ọrụ naanị ya na ụlọ ọrụ mmanụ na gas bụ slips na ọdịda, ihe na-ada, mbepụ na ọkụ na-aga n'ihu na-egosipụta ikuku. Ihe ize ndụ ahụ nwere ike ịghọ ọnọdụ dị ize ndụ nke achọrọ nzaghachi ozugbo.
Ngwọta maka ụlọ ọrụ mmanụ na gas bụ iji ngwa ọhụụ ọhụụ dịka ihelp-man down system nke bụ sistemụ 3G GPS kacha nta n'ụwa. Onye ọrụ naanị ya nwere ike pịa bọtịnụ ahụ mgbe ọ na-enwe ihe egwu ọ bụla ma ọ bụ ozi akpaka ga-eziga ya na ọnọdụ mgbe ọ na-ada n'ihi ọnọdụ ọ bụla. Ihe ndị ọzọ nwere ike ịbụ iji ngwaọrụ nchekwa dị ka masks, uwe aka na ngwaọrụ ndị ọzọ iji hụ na nchekwa anụ ahụ.
Mpaghara ọkụ eletrik:
Ngalaba a nwere ihe kachasị dị ize ndụ ma a bịa na ndị ọrụ naanị ya, ọ bụ n'ihi na ndị a nwere kpughere ọkụ eletrik na ọrụ ndị ọrụ naanị otu a karịrị ihe karịrị otu elekere n'oge a, nsogbu ọ bụla nwere ike ịme nke nwere ike ibute kwupụta nsonaazụ kacha njọ. E nwekwara ihe ize ndụ nke ọnwụ ma ọ bụrụ na ihe mere na anaghị ewere ihe ozugbo. Ihe egwu ndị ọzọ ha nwere ike iche na mgbe ụfọdụ ha na - enweta ujo elektrik mgbe ha na - arụ ọrụ n'ụlọ elu, n'ihi nke a, ha nwere ike ịda n'ala ma nwee mmerụ ahụ dị njọ.
Ya mere, nzukọ a nwere ndị ọrụ ahụ nọ nanị ha bụ ndị zụrụ azụ nke ukwuu. Ebe ha kwesiri inwe nhazi ihe ha ga-eme ma ọ bụrụ na onye ọzọ achọpụta na nsogbu adịghị. Ha kwesịrị ịrụ ọrụ n'ime ụzọ abụọ ahụ. Ha nwere ike iji bel na-eme ihe kwesịrị ekwesị ka ha na-arụ ọrụ na saịtị ndị dị elu ma ọ bụ na ha nwere ike iji sistemụ mmadụ nke ga-enyere njikwa aka ịmụrụ anya ngwa ngwa mgbe onye ọrụ naanị ya na-ada n'elu elu saịtị.
Thelọ ọrụ ahụ na-ewu ụlọ so na ụlọ ọrụ na-amụba ngwa ngwa n'ihi mmụba ọnụ ọgụgụ mmadụ na ọnụ ọgụgụ obodo na ụwa dum. ụlọ ọrụ iwu ihe owuwu gụnyere ụlọ nke ụlọ, okporo ụzọ, ụlọ, ụlọ ọgwụ, ebe ọrụ, ụlọ ahịa, wdg Mana ndị ọrụ nchekwa nwere nsogbu mgbe ọ na-arụ ọrụ dị elu, mkpọtụ na-esite na ngwaọrụ, igwe dị arọ dị elu karịa ọrụ ndị ọzọ. Ihe dị oke egwu na nsogbu dị iche iche chere ihu na saịtị dị, daa na mkpọda, ịbụ nke a na - ejide n'etiti ihe, ịda n’elu ihe ahụ, ihe na - akwụghị ụgwọ, na - agbadata ma ọ bụ daa na ube nke steepụ, ujo elektrik, mmerụ isi, ịda site na igwe dị arọ. ụdị cranes ahụ, ka ị na-ebugharị ma na-ebugharị igwe dị arọ site n'otu ihe gaa na ihe ọzọ, ọzụzụ na nlele na-adịghị mma. mgbe ụfọdụ ndị ọrụ naanị ha na-arụ ọrụ n'ime ime obodo n'ihi na enweghị ezigbo mkparịta ụka ha enweghị ike ịmekọrịta otu ha.
Maka iwelata njikwa ihe ndị a dị mkpa kwesịrị ijikọ nchekwa dịka akụkụ nke atụmatụ, nke mbụ, ha kwesịrị ịnye ndị nkuzi na ndị nlekọta ọrụ ọzụzụ na ọzụzụ kwesịrị ekwesị mgbe ahụ ha ga-eduzi ndị ọrụ ha na-arụ ọrụ n'otu n'otu na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ na-enweghị enyemaka ọ bụla site na ọkwa nke njikwa. Ha ga-ewebata usoro nchekwa ọdịda yana nchekwa isi iji belata ọnwụ na mmerụ ahụ dị ukwuu n'oge ọrụ. Maka ndị ọrụ naanị ha, ha ga-enwerịrị ọzụzụ ga - enye ha nchekwa nchekwa ma gosi ha ụzọ ha ga - esi rụọ ọrụ na igwe ndị kwesịrị ekwesị. Foreman ma ọ bụ onye nlekọta kwesịrị ime nyocha saịtị tupu ịmalite ọrụ. Nyochaa dị mma na inyocha ngwaọrụ & akụrụngwa oge niile.
Ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ime mpaghara dịpụrụ adịpụ kwesịrị inye ihe ngosipụta ngosipụta kwesịrị ekwesị, yabụ na ha echeghị nsogbu ọ bụla mgbe ha na-arụ ọrụ. Maka nkwukọrịta dị irè, njikwa nwere ike iji ekwentị ikuku ma ọ bụ ngwaọrụ eletriki ọ bụla. Ha nwekwara ike iji robots maka ọrụ dị iche iche iji belata mmerụ ọrụ naanị yana oke ọnwụ.
Ego na Ngalaba mkpuchi:
N'adịghị ka ngalaba ndị ọzọ na mpaghara ego na mkpuchi, ego onye ọrụ na-ahụ maka ya dị elu karịa na ọrụ ndị ọzọ. Na ngalaba ụlọ akụ na ụlọ ọrụ inshọransị, ndị ọrụ naanị ya bụ ndị nnọchi anya ahịa & ndị isi mmepe azụmahịa. Ndị na-arụ ọrụ na mpụga akụ na-anwa iru ndị ahịa maka ebumnuche dị iche. Dị ka onye na-aga ịnakọta ịnakọta ego ma ọ bụ ego mkpuchi, n'ihi na ha na-eburu ego buru ibu enwere ohere ọ bụla na-adịghị mma ndị mmadụ nwere ike imerụ ndị ọrụ ibe ha nke nwere ike imebi ihe ego na - abụkwa ihe egwu nwere ike ibute ndị ọrụ. Ndị ọrụ na-ahụ maka ego na ụlọ ọrụ ịnshọransị nwere ike ịta ahụhụ site na nkụchi ọkụ, nsogbu akpịrị ịkpọ nkụ na ihu igwe na-ekpo ọkụ.
Yabụ, njikwa ahụ nwere ike ịga maka GPS nsuso ngwaọrụ nke ga - enyere njikwa aka ịchọpụta ndị ọrụ naanị ya. Maka ime ka ulo oru ha diri ndi oru mfe, ha puru iburu ha ugbo ala nke di n’uzo na echebe ha site n’anyanwụ na oge ihu igwe. -Hazigharị ọrụ iji zere ihe ize ndụ metụtara ahụike, nye ndo na eke mmadụ ma mee ka anwụ.
Lọ ọrụ ụlọ:
Ọdịdị nke ụlọ ọrụ ụlọ dị na ya nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ naanị; nke ndị nnọchi anya na-eso ndị na-azụ ma ọ bụ ndị na-ere ihe, ị maghị ihe ị na-ahụ n'azụ ụzọ na enwere ohere ha nwere ike imerụ ya ahụ. Ewezuga ndị ọrụ ahụ na-ebukarị nnukwu ego nke nwere ike ịmepụta nsogbu mgbe mmadụ nwetagoro nkọwa banyere ego ahụ. N'ime ụlọ ọrụ ụlọ, onye na-ahụ maka ọrụ naanị enweghị ezigbo ozi gbasara ọnọdụ ahịa, ọnụego ya, ọnụ ahịa ya na ọnụ ahịa brọlo, ụlọ na ebe azụmahịa. Ọrụ onye na-arụ ọrụ na ụlọ na ụlọ na-aga eleta ubi ka ọ bụrụ naanị onye ọrụ naanị nwere ike ịta ahụhụ n'ọtụtụ nsogbu ahụike na ihu igwe na-ekpo ọkụ.
Yabụ, dịka usoro ndị ọzọ dịka nsuso GPS, chụpụrụ ya bụ mgbọrọgwụ dị mma, na-ebu ngwá ọrụ nchebe mgbe niile. Ewezuga nke ahụ esoro ndị ahịa kerịta ozi nkeonwe gị ma gbalị isoro ndị ahịa gị zute ọha. Nchịkwa aghaghi ịnye ozi ziri ezi gbasara ahịa, ọnụ ahịa na ọnụego saịtị dị iche iche ka onye ọrụ naanị ya ghara ịda azụ mgbe ọ na-egosi ndị ahịa ma nyefee ihe ngosi na ezigbo eziokwu na onu ogugu. Maka nhazi ndị ọrụ naanị ha kwesịrị iwepụta nchekwa dịka itinye sunscreen, chebe ndị ọrụ naanị site na ndò ma ọ bụ nke wuru awuru ma ọ bụ ime mgbanwe ụfọdụ na nhazi ka ndị ọrụ owu na-eji chebe onwe ha pụọ ​​na ihu igwe.
Ọrụ nke ndị ọrụ na-arụ bụ ịtọgbọ ahịhịa ndị mmadụ na kpofuru ekpofu ma kpofuo ya. Ọrụ dị ọcha nke onye na-ahụ maka ọrụ ahụ wee lelee sistemụ mmiri ahụ ma wepụsịa ihe mgbochi niile, mkpọda mmiri ma ọ bụ mmebi ahụ. onye ọrụ naanị ya nwere ike iche ihe egwu dị ka ikpughe ikuku ndị na-emerụ ahụ; methane, sọlfọ hydrogen. Ndị ọrụ na-adịghị ala ala metụtara ọtụtụ ọrịa mgbe ha na-arụ ọrụ dịka ịba ọcha n'anya, nsogbu akpụkpọ ahụ. Ogugu, ihe nchapu, ọnya na-abanye n’agha bụ ihe ọghọm ndị a na-eche ihu. Ihe ndị ọrụ nọ nanị ya na-abawanye mgbe ha na-arụ ọrụ n'ime ala n'okporo ụzọ dị iche iche, ha na-eche nsogbu ndị dị ka iku ume, hydrogen, enweghị ìhè, enweghị ego dị ụkọ. Ihe kachasị dị ize ndụ bụ na ha merụrụ ahụ site na ụmụ ahụhụ dị iche iche n'oge ọrụ. Ha anaghị akwọ aka nke ọma mgbe ha rụchara ọrụ ha n'ihi enweghị mmata na ihe ọmụma
Nchịkwa ahụ kwesịrị ịme usoro ọgwụ na ntọala mgbe niile iji chọpụta nsogbu ahụike ma ọ bụ nsogbu ọ bụla na ndị ọrụ owu. Ndị na-arụ ọrụ bekee ga-enyerịrị akwa dị mma, uwe, na akpụkpọ ụkwụ ka ha wee chekwaa onwe ha pụọ ​​na mkpụkọ, ọnya na ọnya na-abanye. Nye ha ezigbo nkpuchi na ọwa ọkụ iji rụọ ọrụ ha nke ọma. Ekwesịrị inye ndị ọrụ ọfụma ịmara ihe na agụmakwụkwọ. Kụziere ha otu esi ehicha aka mgbe ha rụchara ọrụ ka ha wee chekwaa onwe ha pụọ ​​n'ọrịa dị iche iche.
N’isiokwu a, anyị ga - ekwu okwu dị nkenke banyere isi ngalaba na - emetụta nsogbu nke onye ọrụ naanị ya, ya mere, anyị atụpụtala ihe ngwọta nke mpaghara ọ bụla. Site na mmejuputa atumatu a ma kpokota azịza ndi a dika akuku nke atumatu, njikwa nwere ike belata nsogbu ndi a ma nwekwuo oru na mmeputa nke ndi oru ha. Ọganiihu nke otu nzukọ kpamkpam na-adabere na arụmọrụ ndị ọrụ ọkachasị ndị ọrụ naanị ha; ọ bụrụ na nzukọ a haziri ndị ọrụ naanị ha ọrụ, ha nwere ike mezuo ebumnuche ha na ebumnuche ha chọrọ.
Nzuzo 3169 20 Echiche Taa